Akwankyerɛ Kuw No Hyɛ Jehovah Adasefo A Wɔwɔ Russia Nye Ukraine No Nkuran
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bislama Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English (Borɔfo) Estonian Ewe (Awona) Finnish French Ga (Nkran Kasa) Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kabyle Kannada Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Krio Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Malayalam Mfantse Mingrelian Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Oromo Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tahitian Tajiki Tarascan Telugu Tigrinya Tlapanec Tojolabal Totonac Tsonga Turkish Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Valencian Vezo Welsh Xhosa Zapotec (Isthmus) Zulu
Akwankyerɛ Kuw No Hyɛ Adasefo A Wɔwɔ Russia Nye Ukraine No Nkuran
“Yɛtsee nkã dɛ wɔada ɔdɔ soronko edzi akyerɛ hɛn!” Dɛm na basia bi a ɔwɔ Ukraine, a otsiee krataa tsitsir bi a Jehovah Adasefo Akwankyerɛ Kuw no munyi Stephen Lett kenkanee no kãe. Ɔbaa yi yɛ Adasefo 165,000 a wotsiee Onua Lett ne kasaa a ɔmae, aber a ɔbɛseraa hɔn man no wɔ May 10 nye 11, 2014 no no mu kor.
Wɔkyerɛɛ Kyerɛwnsɛm mu ɔkasa ahorow nye dɛm krataa tsitsir no ase kɔr kasa ahorow enum mu, na wɔdze faa mframa mu monaa Ahendzi Asa ahorow bɛyɛ 700 a ɔwɔ Ukraine nyinara.
Wɔ dɛm dapɛn ewiei kor no ara no, Mark Sanderson a ɔno so yɛ Akwankyerɛ Kuw no munyi, kenkaan dɛm krataa tsitsir no wɔ dwumadzi bi a wɔyɛɛ maa hɛn nuanom a wɔwɔ Russia no ase. Wɔkyerɛɛ dɛm dwumadzi no ase kɔr kasa bɛyɛ 14 mu, na wɔdze faa mframa mu monaa nyimpa 180,413 a wɔwɔ asafo ahorow 2,500 a ɔwɔ Belarus nye Russia mu no.
Dɛm krataa yi a ofi Akwankyerɛ Kuw no hɔ no, wɔhyɛɛ da kyerɛwee maa asafo ahorow a ɔwɔ Russia nye Ukraine. Onua Sanderson kenkaan no wɔ Russian kasa mu, na iyi kãa edwumayɛbea nkorbata a ɔwɔ Russia no ma ɔkyerɛɛw dɛ: “Ɔkãa enuanom no hɔn akoma paa dɛ Akwankyerɛ Kuw no dwen hɛn so a yɛwɔ dɛm wiadze ne fã yi ho. Hɛn nyinara tsee nkã dɛ gyama Akwankyerɛ Kuw no reyɛ hɛn etuu kɛse bi.”
Nna krataa no ne tsirmpɔw nye dɛ wɔdze bɛkyekye Adasefo a wɔwɔ mbea a amanyɛsɛm mu basasayɛ akɔ do no werɛ, na wɔaahyɛ hɔn dzen. Ɔhyɛɛ enuanom no nkuran dɛ wɔnkɔ do ara nyɛ nyimpa a “wommfi wiadze,” dze nam dɛ worinngyina ɔfã biara wɔ wiadze no amansɛm mu.—John 17:16.
Ntsi, Akwankyerɛ Kuw no hyɛɛ Adasefo no nkuran dɛ wɔnkɔ do nye Jehovah nnya ebusuabɔ pa dze nam mpaabɔ, adzesũa, nye Nyankopɔn Asɛm a wɔbɔdwendwen ho no do. Wɔkaa etsiefo no dɛ ɔmmfa ho nsɔhwɛ biara a wobehyia no, wobotum enya ahotodo wɔ Nyankopɔn n’anohoba a ndaadaa nnyi mu a ɔwɔ Isaiah 54:17 no mu: “Dadze biara a wɔbɔ tsia wo no, ɔrennsaa.”
Nsɛm a Akwankyerɛ Kuw no dze wiee hɔn krataa no nye dɛ: “Yɛdɔ hom nyinara papaapa. Yɛserɛ dɛ, hom nnya awerɛhyɛmu dɛ hom wɔ hɛn adwen mu mber nyina, na yɛdze hom adzeserɛdze to Jehovah enyim ma hom.”
Aber a Jehovah Adasefo edwumayɛbea nkorbata a ɔwɔ Ukraine no rekã nseraa no ho asɛm no, wɔkyerɛɛw dɛ: “Enuanom no enyi sɔɔ mbrɛ Akwankyerɛ Kuw no fi ɔdɔ mu dwen hɔn ho no paa. Nya a yenyaa Enuanom Lett nye Sanderson wɔ Ukraine nye Russia wɔ dapɛn ewiei kor no ara no dzii adanse pefee dɛ koryɛ da Nyankopɔn nkorɔfo ntamu, na ɔkyerɛɛ enuanom no mbrɛ Jehovah nye Jesus dwen hɔn ho. Hɛn nyinara gyee too mu dɛ nseraa yi baa wɔ ber a ɔfata mu, na ɔhyɛ hɛn dzen dɛ yɛnkɔ do nsom Jehovah ɔmmfa ho nsɛndzendzen a yebehyia no.”
Ana wɔdze ɔman no eyiedzi to esian mu?